Mibvunzo - FAQ - Shenzhen Sunson International Logistics Co., Ltd.
Q1: NDINODA KUTI KUTI UZADZISE SEVHURE?
-> Uri kunze kweChina asi uchiwana kubva kuChina?
-> Iwe unoda rutsigiro rwekukurukurirana nevagadziri veChinese?
-> Iwe unogumbuka here neyekuchengetedza mabasa epamba uye zvigadzirwa?
-> Uri kutsvaga basa rinodhura?
-> Iwe unoda kukura vhoriyamu kubva pa10 kusvika 10,000 pamwedzi?
Kana hongu, saka Sunsonexpress Kuzadzikiswa ndiyo mhinduro yehungwaru kwauri.
Q2: NGUVA IYO YAKAKWANA IYO YOKUDZIDZA KUTI UZADZISE RINI?
Kunyangwe iwe uri kambani yekutanga kana kambani yakakura, kana iwe ukaona uchishushikana nemabasa ekuchengetera, imba yekuchengetera (kusanganisira mutengo wevashandi uye zvakare rendi), kunyanya kana vashandi vako vachishanda nesimba kwezuva rose asi kuchine vakadzoka maodha, uye mukuwedzera iwe hauna nguva yekutarisisa pane rako bhizinesi kutengesa, saka inguva yekuziva kuti ungangoda kuburitsa yako odha kuzadzikiswa uye kubhadhara zvakanyanya pane chakanyanya kukosha chinhu - bhizinesi. Kuburitsa kuzadzikiswa kwechirongwa chisarudzo chakarongeka chinonzwisisika mukukura kwebhizinesi. Chero nguva yako odha vhorumu painopfuura yaunokwanisa kubata, ndapota bata Sunsonexpress Kuzadziswa kunotarisira uye kurukura kuti tingakubatsira sei mukukudza bhizinesi rako uye mukurumbira. Isu tine hupfumi ruzivo pamuchinjikwa muganhu e-commerce kutengesa uye zvakare logistics iyo inogona zvirokwazvo kubatsira bhizinesi rako kune rinotevera danho.
Q3: NZIRA YOKUSARUDZA KODZERO YOKUZADZIDZA KAMPANI?
Paunenge uchitarisa kuburitsa kunze kwako kuzadziswa masevhisi, iwe uchafanirwa kufunga izvi zvinhu:
Chimiro chemutengo: Funga kuti ndezvipi zvinhu (hukuru, uremu, chigadzirwa chikamu nezvimwewo) zvauri kutengesa uye ndeipi yako bhajeti yekuzadzisa sezvo iwe uchizoda kubhadhara mari zvichienderana nesaizi uye huremu hwezvinhu zviri kutumirwa. Uye iwe zvakare unofanirwa kuziva kuti ndezvipi mutengo wekuchengetedza zvinyorwa uye kutora uye kurongedza zvinhu zvako. Chero ipi mari yakavanzika uye chibvumirano chenguva refu nezvimwe.
Sarudzo dzekutumira: Kana iwe ukatengesa kune dzimwe nyika, uchafanirwa kuve nechokwadi kuti kambani yekuzadzikisa inokwanisa kutumira kune dzimwe nyika.
Nzvimbo Yekuchengetera: Tarisa uone kana nzvimbo yekuzadzikisa iri munzvimbo "chaipo" sezvo uchizoda kuti yako inventory iunganidzwe nekambani yekuzadzikisa kana kuitumira nemugadziri nemutengo unodhura. Zvakare kana nzvimbo yekuchengetera iri padyo nendege, iwo mukana wakanaka kuronga kurongedza kwekukurumidza kupedzisa vatengi.
Kutsigira Kwevatengi: Kana chimwe chinhu chikatadza kuita zvakanaka panguva yekuraira, kuzadzisa uye kuendesa maitiro, iwe ungade kutaura kune mumwe munhu uye kutsvaga rutsigiro, iri ndiro basa rehwaro rinofanirwa kupihwa. Zvakare, kana kambani yekuzadzikisa ichikwanisa kupa iyo-yekutengesa sevhisi kupedzisa mutengi (semuenzaniso. Yekutevera odha) pachinzvimbo chako, ndiyo yakakosha bhenefiti yekuti iwe uwane kunetseka sevhisi sevhisi.
Kubatanidzwa: Sezvo iwe uri kushandisa yechitatu bato mupi, ingo tarisa kana yavo sisitimu yakatobatanidzwa kana kusabatana-neako masystem aripo senge webhu yako yekutengesa, misika senge Amazon, ERP, kana chero mamwe mapuratifomu. Zvakare zvinofanirwa kuve zvakanaka kana zvichibvumidza kuve nekuonekwa kwakazara pane yekutarisa hesera uye kuzadzisa maitiro chero nguva uye chero kupi.
Zvese zviri pamusoro zvinhu zvakakosha chikamu chesevhisi Sunsonexpress kuzadzikiswa yakapihwa.
Q4: NDINOGONA KUSVIRA YANGU ACCOUNT Ruzivo IN REAL-NGUVA PAMWE WEB?
Hongu. Sunsonexpress sisitimu inobvumidza vese vashandisi 24/7 chaiyo-nguva ruzivo pamwe nekutonga kwakazara pamusoro pekuverenga uye kurongeka manejimendi.
Q5: Ndeupi rudzi rwebasa raunogona kupa?
Isu tinopa akasiyana masevhisi ayo isu tinotenda isu tinogona kugutsa ako akasiyana akasiyana zvido mune zvekutengesa cheni.
1.Warehouse Fulfillment Service inosanganisira kugamuchira, kuchengetedza, kutora & kurongedza.
2.Global kutumira sevhisi kubva kuChina kuburikidza nePost services, makuru epasirese Express masevhisi, edu ekuzvigadzirira akazvitsaurira Mitsara, FBA yekufambisa mitsara, Yekutakura yekufambisa sevhisi, Yekutakura kweMhepo, yegungwa kutumira agency sevhisi.
3.Drop-chikepe rubatsiro runosanganisira kurongedza, kusimbisa, kunyora, gungano, nezvimwe.
4.Add-on service: kitting, branding, webstore kusangana.
5.Products kutsvaga uye kutenga.
6.Payment mumiriri wezvinhu zvako.
Q6: Ko imba yedu yekuchengetera yakachengeteka here? Isu tinopa inishuwarenzi pane zvigadzirwa mudura redu?
Tiine zvinhu zvakawanda kwazvo zvatinotarisira kana kuchengetwa, hatingakwanise kurasikirwa nazvo.
Imba yedu yekuchengetera yakagadzirirwa nemagetsi ekudzvinyirira masisitimu pamwe nekutarisa kwemaawa makumi maviri nemana uye nekuwana mukana wekuona kuchengetedzwa kwezvigadzirwa zvako. Yedu ruzivo imba yekuchengetera vashandi vakaita maitiro akagadziriswa ekupaka maitiro ekudzivirira zvinhu kubva pakurasika kana kukuvara panguva yekubata maitiro. Muzviitiko zvisingawanzoitika zvezvinhu zvakarasika kana zvakakanganisika, zvigadzirwa zvako zvinogara zvichisimbiswa kusvika kukosha kwechigadzirwa. Mari yeinishuwarenzi iri 0,1% ye "Chigadzirwa Chigadzirwa" (chaiko mutengo) wezvigadzirwa zvako zvegore rega.
Q7: Unogona kugamuchira kutumirwa kwezvinhu zvakaomarara here?
Hongu, tinogona kugamuchira kutumirwa kwebhatiri, mvura, zvizoro, hupfu, nezvimwe.
Q8: Ndingaite sei kubhadhara mari yekutumira kana mamwe mabasa ebhadharo? Ndinofanira kubhadhara mari iyi here?
Ehe, iwe unofanirwa kubhadhara izvi mari. Iwe unogona kuita kubhadhara kwatiri kuburikidza nekutumira mari, kubhangi kuchinjisa, waya kuchinjisa, kiredhiti kadhi, PayPal nezvimwe. Ipapo, isu tinobvisa mari kubva kuaccount yako otomatiki pese patinokutumira mapasuru iwe kana kukupa masevhisi iwe. Kuti udzivise kunonoka mukutumirwa uye masevhisi, ibasa rako kuona kuti pane mari yakakwana muaccount yako. Iwe unogona kupinda kune yedu sisitimu kuti uone iyo yekutengisa ruzivo uye chiyero cheakaundi yako.
Q9: Unogona kundibatsira kutenga kubva kuChinese vatengesi?
Isu tinoziva kuti vamwe vatengesi veChinese havagashiri mari yekunze. Sunsonexpress inogona kupa "wega shopper" sevhisi, inogona kuraira uye kubhadhara iwe.
Isu tinoziva zvakare kuti vamwe vatengesi veChinese havaendese zvinhu kunze kweChina. Sunsonexpress inogona kupa yekufambisa sevhisi yezvako zvinhu zvaunotenga pamawebhusaiti eChinese. Ndapota taura nesu ne email: Andy@sunsonexpress.com
Q10: Sanganisa akawanda mapakeji uye mberi seimwe pasuru?
Sunsonexpress inopa yekusimbisa sevhisi. Kana iwe uri kutenga kubva kune vakasiyana vanotengesa, Tinogona kumirira kuti vese vasvike tobva tatumira kunze mune rimwe bhokisi.
Q11: Ungabhadhara sei?
Isu hatitumire invoice uye tobva tamirira kubhadhara kwako. Isu tinoshandisa prepaid system. Iwe unogona kuisa mari muaccounts yako yeAksonexpress uye yedu sisitimu inozongo tarisa mari kubva kuaccount yako Iwe unogona kuongorora ese mashandisirwo emari kana iwe ukapinda kune yedu Mushandisi Center. Mari yasara muaccount yako inoshandiswa pakutengeserana kwako mune ramangwana. Ndiro basa rako kuona mari yakakwana yekudzivirira kukanganiswa kwebasa. Unogona kukwirisa account yako kuburikidza nePayPal. Kuendesa zvakachengeteka mubhadharo,
Pane nzira mbiri dzekuti ubhadhare fizi / kukwira kumusoro account yako:
1.Bank kuchinjisa: Ndokumbira utaure yako Sunsonexpress Mushandisi ID kana iwe kumusoro-kumusoro kuburikidza neBhangi Kutamisa, kuitira kuti tikwanise kuona yako kubhadhara uye kiredhiti account yako zvinoenderana.
2.PayPal Akaunti: Ndokumbirawo uise mari zvakananga kuburikidza neyedu system. Sisitimu yedu inozokweretesa account yako muRMB yemari chaiyo yawakagamuchira. Ndokumbira utarise kuti PayPal muripo wekubata mubhadharo kana iwe uchichinjisa kubhadhara kwatiri. Pamusoro pezvo, isu tinobvisa 2.5% mari yekutsinhana mari kune ese mari kunze kweHKD.
3. Mubhadhari. Ndokumbirawo muise mari zvakananga kuburikidza nesystem yedu.
1. Tichakwereta account yako zvichibva nezvatakatambira chaizvo. Kazhinji, ichave iri iyo mari yawakatumira kubvisa iyo PayPal mutengapiro fizi.
2. Kana iwe ukatumira muUSD, saka tinozoichinjisa kuRMB uye kukwereta account yako.